उत्पीडित समुदाय नै बढी आन्दोलित हुनुपर्छ : सरिता तिवारी - Nepal Readers
Home » उत्पीडित समुदाय नै बढी आन्दोलित हुनुपर्छ : सरिता तिवारी
विगत ८० वर्ष यताको नागरिक प्रतिरोध निरन्तर आजसम्म पनि किन जरुरी रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो समय पुष ५ गतेको कदमले अझ बढी मुखर रुपमा हामीलाई अनुभूति दिलाएको छ । (म ७० वर्ष भन्दिनँ, किनभने हामीले खरिबोट र सिफललाई साक्षी राखेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ।) किनभने यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीलाई यो अवसर नदिएको भए सबै खालका प्रतिगमनहरूको अनुभूति हामीले नगर्ने रहेछौँ ।
छुद्रता, लोभ र कुर्सीमोह लगायत अहिलेको दलाल पूँजिवादी राज्यसत्ताको केन्द्रमा आफूलाई राखेर जसरी उहाँले ढलीमली गर्दै आउनुभयो र एकपछि अर्को गर्दै महिलाविरोधी, दलितविरोधी र उत्पीडित समुदायविरोधी गतिविधिहरु गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण पञ्जाहरूले राज्यसत्ताका सबै संस्थाहरुलाई कब्जा गर्दै आउनुभयो । त्यसको उत्कर्ष चाहिँ पुष ५ गतेको कदम थियो ।
‘प्रतिगमनसँग बानी परेका रहेछौँ’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको कदम नचालेको भए अहिले हामीलाई हाम्रो राजनीति र समाजमा कतिसम्म प्रतिगमनकारी थियो र छ भन्ने कुराको अनुभूति नै नहुने रहेछ । हाम्रा अनुभूति अझै पनि हाइवरनेट भएर बसेको छ भन्ने लाग्छ । किनभने शुक्रबारको नागरिक आन्दोलनको संख्याको हिसाबले हेर्दा ठूलो मुठभेड हुनुपर्ने थियो। मुठभेड गर्नका लागि जनता तयार भएर आउनुपर्ने थियो। तर त्यस्तो अवस्था अझै देखिएन । टुँडिखेल मार्चमा जनताले ‘टुँडिखेल हाम्रो हो’ भन्दै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो उर्जा अझै जनतामा किन आइसकेको छैन भन्ने लाग्छ ।
हामी चाहिँ प्रतिगमनसँग बानी परेका रहेछौँ । अझै पनि बानी पर्दै रहेछौँ । यदि हामीले यो यो प्रतिरोध नगर्ने हो भने यो प्रतिममन अझै दुरगामी असर पार्नेखालको, अझै द्धन्द्धकारी र धेरै ठूलो बलिदान खानेवाला छ भन्ने अनुभूति गरिहेको छु । त्यसबाट सजग भएर आन्दोलनलाई करेक्सन गरेर र अझैपनि आन्दोलनमा समाहित भएर यो प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।
समाज पनि प्रतिगामी
नेपाली समाजपनि पहिलेदेखि नै प्रतिगमनकारी छ भन्ने कुरा हामी पनि अहिले आएर अनुभूति गरिरहेका छौँ । मैले अघि भनिसकेँ अझै हामी हाइबरनेट भएर बसिरहेका छौँ, अझै हामी शितनिन्द्रामै छौँ । जस्तो कि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान बन्दै गर्दा कति अग्रगामी विषयवस्तुहरू थिए । त्यसलाई कसरी हुन्छ पछाडि पार्ने र कमजोर गराउने तरिकाले संविधान लेखनलाई कमजोर बनाइयो र पहिलो संविधानसभा भंग भयो । त्यसपछि गराइएको दोस्रो संविधानसभा चुनाव कस्तो पृष्ठभूमिमा भयो, कस्को नेतृत्वमा भयो, त्यतिबेला कस्तो मन्त्रिपरिषद थियो र कसरी निर्वाचन सम्पन्न भयो भन्ने कुराको साक्षी हामी छौँ ।
त्यसपछि संविधान लेखन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो भनेर हेर्दै गर्दा आज महिलाविरोधी नागरिकता विद्येयकमा शशि श्रेष्ठजस्ता हिजो इतिहास बनाएका महिलाहरू ‘ल भयो र ल पुग्यो भनेर’ कसरी त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरिरहे । कसरी पम्फा भुषाल जस्ता इतिहास बनाएका महिलाहरू ‘समानता र राष्ट्रियता एउटै कुरा होइन, राष्ट्रियता भन्ने कुरा समानता भन्दा जहिले पनि माथि हुन्छ’ भन्ने अवस्थामा पुगे । उहाँहरु र रामकुमारी झाँक्रीहरूले हिजो ‘पार्टीभित्र यस्ता कुरा नसच्याए हामी राजीनामा दिन्छौँ’ भनेर किन भन्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि आज उठेको छ ।
त्यसकारण, नेपाली समाज हिजोदेखि प्रतिगमनकारी रहेछ । हिजैदेखि जात व्यवस्था, लिंग व्यवस्था, उँचनिचमा आधारित र सम्पूर्ण सोचको जरा, सोचको विन्दु र ग्रन्थी नै प्रतिगमनकारी रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति नै आजको यो समयले हामीलाई दिएको छ । यस अर्थमा यतिखेरको यो कदम चाहे ओली इतिहासमा खलनायकका रुपमा पटाक्षेप भएको अवस्था किन नहोस्, तर ओलीले हामीलाई यो अवसर दिएका छन् भन्ने लाग्छ । यो अवसरका रुपमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु ।
‘अनागरिकहरू’ कहाँ छन् ?
सडकमा आउने आम नागरिकहरू हुन् । भर्खरै समाजिक सञ्जालमा मैले एउटा पोस्ट गरेको थिएँ, त्यहाँ ‘यो नागरिक आन्दोलनमा अनागरिकहरू त छैनन’ भन्ने कुरा आयो । त्यो कुराले मलाई एकदमै पिन्च ग¥यो । वास्तवमा नागरिक आन्दोलनमा अनागरिकहरू अझै पनि छैनन्, उनीहरूको सहभागिता भएको छैन। जो नागरिक बनाइएकै छैनन । नागरिक बन्ने प्रक्रियाभित्रै उनीहरू छैनन् । अझै पनि जग्गाधनी पुर्जा छैन, नागरिकता छैन र मतदाता परिचयपत्र पनि छैन भने ती मानिसहरू नागरिक आन्दोलनको वृत्तभन्दा बाहिरै पुगे । ती मानिसहरूलाई पार्टीले किनेर आफ्नो आन्दोलनको हिस्सा बनाउन लागेको अवस्था छ । हामीले सोच्नुपर्ने छ, हामीले जनता/जनता भनेको यो भेग वास्तवमा को हो त ? अब नागरिक आन्दोलनसँग जोडिएको कुरा पनि यहीनिर छ ।
उत्पीडित वर्गको आन्दोलन
आज निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्म बलत्कारपछि हत्याका प्रकरण छन् । यी मात्रै होइन अरु तमाम विषय पनि छन् । त्यहाँ माया विकको कुरा छ, दिपिका दिपशीलाको कुरा छ, यो चितवनको मुद्दा म बारम्बार उठाइरहेको छु । यो विषयमा राष्ट्रिय मिडियाहरू कसैले पनि यसरी उठाइरहेको छैन । मैले किन उठाइरहेको छु भने ठ्याक्कै निर्मला प्रकरणकै बेला २०७४ साल जेठ २० गते माडीमा दिपिका दिपशीलामाथि उस्तै घटना भयो र माडी लगायत चितवनका सम्पूर्ण दल र दलका नेताहरू लागेर आरोपीलाई छुटाउनतिर लागे । हत्यारा को थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कोही पनि लागेनन् ।
पछिल्लो समय हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दै गर्दा यसरी समाजमा अपराधीलाई बचाउने चरित्रपनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आज फेक इन्काउन्टर भनेजस्तै फेक अपराधी सार्वजनिक गर्ने वा किनेको अपराधी सार्वजनिक गर्ने त राज्यले गरिरहेको छैन ? राज्यले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम त गरिरहेको छैन भन्ने शंकाको चाहिँ हामीले सुविधा लिन सक्ने अवस्थामा उभिएको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने आज सबैभन्दा बढी आन्दोलित हुनुपर्ने महिलाहरू छन् । आज सबैभन्दा बढी आन्दोलित हुनुपर्ने दलितहरू छन् । आज सबैभन्दा बढी आन्दोलित हुनुपर्ने उत्पीडित जाति समुदायहरू छन् ।
ती समुदाय दलहरूमा बाँडिएका छन्, छरिएका छन् । ती समुदायहरू ओलीतन्त्रमा समर्थक भएर हिँडेका छन् । दलितहरू पनि ओली समर्थक भएर हिँडेका छन् । महिलाहरू पनि छन् जो ‘राष्ट्रपति ठिक हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति सही हो र राष्ट्रपतिलाई जोगाउनुपर्छ’ भन्दै हिँडेका छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा समेत बिर्सेर गरेका गतिविधिहरूलाई पनि समर्थन गर्ने र राष्ट्रपतिलाई ‘विधवा’ मात्रै देख्ने र त्यो विधवापनको विज्ञापन गर्ने, त्यसलाई बेचेर खाने र राजनीतिक ‘इमोसन’को विषय बनाउने महिलाहरू पनि छन् ।
अब देशका सडकहरू महिलाहरूले भरिनुपर्छ । अपराधीहरू किनिएको त छैन भनेर शंका गरिँदै गर्दा महिलाहरूले यो देशको सडक भरिनुपर्ने हो । महिलाहरू कहाँ छन् ? दलितहरूले यो देशको सडक भरिनुपर्ने हो तर दलितहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न छ । यसरी हेर्दा उत्पीडित समुदाय नै आन्दोलित हुनुपर्ने हो । जसलाई सबैभन्दा बढी मर्का परेको छ, त्यही समुदाय नै सबैभन्दा बढी आन्दोलित हुनुपर्ने हो । तर मैले त्यस्तो अनुभव गरिरहेको छैन । उसो त आन्दोलनमा आउनका लागि पनि एउटा सामथ्र्य चाहिन्छ । शायद त्यही भएर
कमजोर वर्ग आन्दोलन आउन नसकेको हो कि?
खासमा यो काठमाडौँको आन्दोलनको मोहरी के हो त ? यसको औरा के हो भनेर पनि म काठमाडौँ आएको थिएँ । तर मैले जस्तो अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यस्तो देखिनँ । जस्तैः टुँडिखेल कब्जा गर्नु भनेको सानो विषय होइन । टुँडिखेल जनताको हो । जनताले यसभित्र हस्तक्षेप गर्न पाउनुपर्छ र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यसभित्र जनताको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्दै गर्दा आज यहाँ पार्टी प्यालेस जस्तो बनाइएको छ । भोज भतेर गर्ने ठाउँ बनाइएको छ । भाडामा लगाइएको छ । यी सारा कुराहरू गर्दै लगेर जनतालाई रत्नपार्कमा सिमित बनाउने ? यहाँ चाहिँ दलाल पूँजिवादको खेल खेलिरहने अवस्थामा सारा काठमाडौँ आउनुपर्ने हो । तर मान्छेहरू चाहिँ एकदमै हाइबरनेट भएर शितनिन्द्रामै बसिरहेका छन् भन्ने एउटा नमिठो अनुभूति मैले गरेको छु ।
राजनीतिक आन्दोलनको कोर्षतर्फ
हामी प्रतिगमनमै बानी परिरहने हो भने भोलि हाम्रो देशमा सधैँ विदेशी शक्तिराष्ट्रको चलखेल हुने, यहाँ विदेशीका दलालहरू मात्रै उत्पादन हुने र हामीले पुस्तौँ पुस्तासम्म दुःख पाउने अवस्था रहिरहन्छ । त्यसलाई रोक्न एउटा विधिको शासन हुनुपर्छ । ‘लोकतन्त्र’ लोकतन्त्र जस्तो हुनुपर्छ।
उस्तै परे समृद्ध र सशक्त जनताको शासन नै स्थापित गर्ने कुरामा हामी अझै अगाडि बढ्नुपर्छ र राजनीतिक आन्दोलनकै कोर्षमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । यस्तो खालको आन्दोलन नागरिक आन्दोलनले नै बोक्न असमर्थ हुन्छ । नागरिक आन्दोलनले प्रोभोक गर्छ र एउटा विन्दुसम्म मात्रै पु¥याउँछ । यसलाई किनारामा लैजान सक्ने सामथ्र्य राजनीतिक आन्दोलनले नै राख्छ । त्यो हुँदा राजनीतिप्रति र संगठित राजनीतिप्रति मेरो जहिले पनि विश्वास रहँदै आएको छ । आज पनि रहेको छ र भोलि पनि रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भोलि एउटा राजनीतिक दस्ताको रुपमा नै काम गर्ने अवस्था आएछ भनेपनि हामी तयार हुनुपर्छ । म आफैंपनि तयार हुनुपर्छ र म त्यसको लागि तयार छु ।
हामीले अहिले अनुभूत गरेको कुरा के हो भने लोकतन्त्र र जनताको शासनलाई जीवित राख्ने हो भने जनता सधैँ जीवित हुनुप¥यो । जीवन्त समाजमा जहिले पनि हर्कतहरू भइरहन्छन् । हामी हर्कतै नगरी सुतेर बसिरहने हो भने, हामी आफ्नो दालभात तरकारी खाने, दैनिक कामहरू मात्रै गरिरहने र पासले भनेको जस्तो घरबाट काममा जाने, कामबाट घर जाने अनि मज्जाले निदाउने मात्रै गरेर बस्ने हो भने कुनैपनि देशको लोकतन्त्र जोगिँदैन । हामीले अमेरिकाका मान्छेहरू पनि आन्दोलित भएको देख्यौँ, व्ल्याक लाइभ्स् म्याटर भनेर ।
भारतमा शाहिलवागदेखि अहिले किसान आन्दोलनसम्म जागृत भएर र एकदमै चनाखो भएर उभिरहेको र डटिरहेको देख्यौँ । भनेपछि हामीमा पनि त्यो खालको एउटा जागरुकता र त्यो खालको निरन्तर आन्दोलनकारी चेत छ । हामी कहिलेसम्म आन्दोलन भन्ने पनि सुनिरहेका छौँ । तर हामीमा आन्दोलनकारी चेत चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसको विकल्प नै छैन ।
(अभियन्ता/लेखक तिवारीसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी। तस्वीर: महेश पाण्डेय ।)